Ny Fiainantsika sy ny Fanompoana VJ: Fandaharana 3-9 Septambra 2018
Hira 13 sy Vavaka
“Ilay Fahagagana Voalohany Nataon’i Jesosy”: (10 min.)
[Alefaso ilay video Fampidirana ny Bokin’i Jaona.]
Jn 2:1-3: Lany ny divay tamin’ny mariazy iray (w15 15/6 4 § 3)
Jn 2:4-11: Vao mainka nino an’i Jesosy ny mpianany rehefa nahita an’ilay fahagagana (jy 41 § 6)
Jn 1:1: Tsy te hilaza i Jaona eo hoe mitovy ihany “ny Teny” sy ilay “Andriamanitra Mahery Indrindra.” Inona no manaporofo an’izany? (“ny Teny”, “niaraka”, “ny Teny dia andriamanitra” fanazavana Jn 1:1, nwtsty *)
Jn 1:29: Nahoana i Jesosy no nantsoin’i Jaona Mpanao Batisa hoe “Zanak’ondrin’Andriamanitra”? (“ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra” fanazavana Jn 1:29, nwtsty)
Famakiana Baiboly: (4 min. na latsaka) Jn 1:1-18
Fiverenana Mitsidika Voalohany: (3 min. na latsaka) Ampiasao ilay hevitra azo resahina.
Fampianarana Baiboly: (6 min. na latsaka) bhs 50, Hevitra 2
Zava-bitan’ny Fandaminana: (7 min.) Alefaso ilay video hoe Zava-bitan’ny Fandaminana, izay tokony halefa amin’ity Septambra ity.
Fianarana Baiboly: (30 min.) jy toko 35 § 12-19
Hira 121 sy Vavaka
^ feh. 11 Mbola tsy misy amin’ny teny malagasy io Baiboly fianarana io. Ao amin’ny Loharanon-kevitra ao Amin’ny Tari-dalana (mwbr) ireo fanazavana ireo (midira ao amin’ny jw.org/mg, ary tsindrio ny ZAVATRA MISY > TARI-DALANA HO AN’NY FIVORIANA).
Ny Fiainantsika Kristianina sy ny Fanompoana: Fandaharana ho An’ny 3-9 Septambra 2018